အစ်မ ရို့စ်.နဲ့..ညီမကန်ဒီ ရှင့်.. သမီးစံ.နှစ်ရက်သုံး ရက်(အချိန်ပေး) ဂူအောင်းပြီး. .သေသေချာ .ရေးထားတဲ့. .ပို့စ်ရှည်ရှည်လေးက ကီးတစ်ခု မှားနှိပ်မိတာကြောင့်..တစ်လုံးမကျန်..အကုန်ပျောက်ကုန်ပါတယ်း( ။
ဒါကြောင့် မို့..အသစ်ထပ်ပြန်ရေးရင် ကြာနေမှာစိုးတာကြောင့်..မေးခွန်းတွေပဲ..ဖြေပေးပါရစေရှင်။
သတိတရတဂ်ပေးတဲ့အတွက်လည်း..အစ်မနဲ့.ညီမလေးကို...ကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့..ရေအ၀တိုက်ချင်ပါ သေးတယ်။း)(စိတ်ပိန်နေပေမယ့်လည်း..ပျော်ပျော်ပါးပါးပဲပေါ့နော်)
ဟုတ်ကဲ့..အရင်နှစ်တွေတုန်းကတော့..ထွေထွေထူးထူး..မခံစားရပါဘူး။အဲ...ဒီနှစ်မှာတော့ ထူးထူးခြားခြား ပျော်ရွှင်မိပါတယ်။..(ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ.မေးမထားတော့.မပြောတော့ပါဘူးနော်း)
ခရစ်စမတ်ပိတ်ရက်ကိုတော့..ပျော်ပျော်ပါးပါး(ဟိုဟာလေးကင်..ဒီဟာလေးစားရင်း) ဖြတ်သန်းချင်ပါတယ်။ ခရီးကတော့..ကုန်ကျခံမယ့်သူရှိရင်..ထွက်တတ်ပါတယ်။း)
အရင်နှစ်တွေကတော့.မရှိခဲ့ပါဘူးရှင်။ဒီနှစ်မှာတော့..လုပ်ဖြစ်ပါမယ်။ဘလော့ဂါတွေနဲ့တူတူပေါ့း)။ ဒါကြောင့် ကြုံတုန်း.တစ်ခုတောင်းဆိုပါရစေ..စီဘောက်ပိတ်ထားတဲ့ အစ်ကိုအစ်မများ. ခရစ်စမတ်နဲ့. နယူးရီး ယား ညေ ရာက်ရင်.. စီပုံးဖွင့်ထားပေးဖို့ပါ။တဂ်ပို့စ်ပိုင်ရှင်လည်းပါ.ပါတယ်း)။အမှတ်တရကတော့..မနှစ်က နယူးရီး ယားမှာ ပုလင်းခွံတွေရောင်းပြီး အမြတ်များများရဖူးပါတယ်။(သန်းခေါင်စာရင်းထဲက.ဦးရေကလည်း နည်း နည်းနောနောပဲကိုးးးးး)။ကိုယ်တိုင်တော့.မနွဲဖြစ်ခဲ့ပါဘူး..အသက်မပြည့်သေးလို့။ :P
မိတ်ဆွေ၊သူငယ်ချင်းများအားလုံး..တစ်ရက်၊တစ်လ၊တစ်နှစ်မကတဲ့.ပျော်ရွှင်မှုတွေကို.ပိုင်ဆိုင်ကြပါစေ၊ ဆန္ဒနဲ့ဘ၀.တစ်ထပ်တည်းကျလို့.လိုအင်ဟူသမျှ.တစ်လုံးတစ်ဝ.ပြည့်ကြပါစေလို့..(ပြောသာပြောရတယ် ဆရာလေး.လေသံများ.ပေါက်နေလေရော့သလားနော်း)
အဆင်မချောပေမယ့်..တစ်နေရာလေးပြုံးသွားရရင်ပဲ ကျေနပ်ပါပြီရှင်း)။
ဒါကတော့..ခရစ်စမတ်ညလေးမှာ“က”ဖို့ အားလုံးတွက် သီချင်း လက်ဆောင်
ဒီတဂ်ပို့စ်ထဲမှာ.မေးခွန်းတစ်ချို့(ဒါမှမဟုတ်.အားလုံး)က..ဘုန်းဘုန်းတို့တွက်..အဆင်မပြေဖြစ်ချင်.ဖြစ်နေပေမယ့်..တခြားနည်းလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီဇင်ဘာခရစ်စမတ်လေးအတွက်.(အမှတ်တရဖြစ်သွားအောင်).ရေးပေးပါဘုရာ့.။း)
ဒယ်ဒီ father ရဲ့.ကျန်းမာရေးကိစ္စတွေနဲ့..မနေ့တစ်နေ့ကမှ..အေးအေးဆေးဆေး.နားခွင့်ရတဲ့ အစ်မ ရွှေ စင် ဦးပါ။အားလည်းနာတယ်..ခင်လည်းခင်တာမို့..အဆင်ပြေမှ..ရေးပေးပါအစ်မရှင့်.။အဆင်မပြေရင်လည်း အရီးကို တာဝန်လွှဲပေးလိုက်ပါ။ :P
(သမီးလေးမွေးထားတာကြောင့်)မိစံရဲ့..မတော်လိုက်ရတဲ့ယောက္ခမလောင်း..အစ်မမယ်သံး)..(Tag ၏း)
ဒီရက်တောအတွင်း..(ကတုံးပေါ်ထိပ်ကွက်သွားတဲ့)အမျိုးသမီးတစ်ဦးကြောင့်..သွေးတိုးတဲ့ထိ.စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရတဲ့ကိုရင်ဒိုး စုံတွဲအား...ကိစ္စအားလုံးအဆင်ပြေ.. ချောမွေ့သွားစေဖို့.. သတင်းမေး. ဆုတောင်း ပေးရင်း. တဂ်ပါတယ်ရှင်။
ဘလော့ဂါများဖြစ်ကြတဲ့..(အစ်မ)မိုးငွေ့၊(အစ်ကို)မိုးယံ၊(အစ်မ)မိုးခါး..ဤသုံးဦးသည်..ဘဇာကြောင့် နာမည်ချင်းဆင်တူနေရသနည်းဟု..(အကြောင်းအရာစုံစုံလင်လင်နဲ့)သိချင်နေပါသဖြင့်..စီအိုင်အေမှ Miss Jerry ပစ်ပစ်အား..(အထူး)တာဝန်ပေး.. ငှားရမ်းရင်း..သက်ဆိုင်သူအားလုံးအား..Tag လိုက်ပါသည်။း)
(မှတ်ချက်။ ။ Jerry.ပစ်ပစ်အား..တာဝန်ကျေလျှင်. Mrs အဖြစ်.ရာထူးတိုးပေးရန်.တာဝန်ယူသည်။း)
တုံးဖလားရွာသား...ဆိုသော်လည်း..မြို့သားများကိုကျော်ကာ..“မယ်လိုဒီဝေါ”တွင်“နိုရာ”သီချင်းဖြင့် မြို့သူများကြားပေါ်ပြူလာဖြစ်ကာ..လူသိများရုံသာမက..(တစ်ရွာလုံးတွင်..တစ်ယောက်တည်းရှိသဖြင့် ) သူ ကြီးမင်းရာထူး..အလိုလိုရရှိထားသူ (အဲဒါ.ကိုရင်ပြောတာနော်း)တဂျီးမင်း..ကို..Tag..ပါတယ်။
ဘလော့ဂါတာဝန်ရော..လူမှုရေး.တာဝန်တွေပါ..ပူးတွဲထမ်းဆောင်နေကြတဲ့..အစ်မ“၀ါ”၊(ဘီဒို.ဒါရိုက်တာ)အန် ကယ်ဇော်.တို့ကို.. Tag ပါရစေ။း))
ပြီးတော့...အစ်မခင်ဦးမေ @ kom ကို Tag ပါရစေ။
မောင်လှမျိုး(ချင်းချောင်းခြံ)ကို.အားကျသူ ..အန်ကယ်ဘကြိုင်(ချဉ်ပေါင်ခြံ) ကိုလည်း. Tag ပါတယ်ရှင်။
ပုသိမ်သူ..ဘာသာရေး.ဘလော့ဂါ.“အစ်မညခင်း”ကိုလည်း Tag ပါရစေ။း))
“ဂျပန်ပြည်မှပါးသော..စာလွှာ”ပိုင်ရှင်..အစ်မကျော်နှင်းဆီလွင်၊အစ်မသက်နန္ဒာ(Thet Nandar Family)၊ အစ်မ ဗေဒါ(မဗေဒါရဲ့ဗေဒါလမ်း)..Tag ပါရစေရှင်။ :D
နေရင်းထိုင်ရင်း..၀မ်းမနာ.သမီးတစ်ကောင်.မွေးစားမိရာမှ..ထားဝယ်ကြိမ်.စီးပွားဖြစ်..စိုက်ရသည်ထိ အလုပ်များနေရှာတဲ့တောင်ကြီးမှ..လျောင်ကီး...အဲလေ..(အမတော်)ကက်စမင်ရဲ့..မောင်တော်ဖလားအန် ကယ်လှိုင်း......
မနေ့တစ်နေ့ကမှ..(ချစ်သူသက်တမ်း) တစ်နှစ်ပြည့်သွားတဲ့.. “မောင်ဘုန်း”နဲ့ ညီမ. ကောင်းကင်ဖြူ.....
အဆိုတော်မဟုတ်တဲ့.ကဗျာဆရာ.“ကိုဘိုဖြူ”၊လွမ်းစရာမရှိရင်..မနေတတ်လို့..တမင်တကာ.နာမည်ပေးထားတယ်လို့ ယူဆရတဲ့.. “ကိုလွမ်းပိုင်ရှင်”၊း)
(မှတ်ချက်။ ။အပြောမခံချင်ပါက...ဓာတ်ပုံတင်ကာ.သက်သေပြနိုင်သည်။း)
ကဗျာရှည်တွေ..ရေးအားကောင်းတဲ့..ထာဝရသစ္စာပိုင်ရှင်“ကိုချမ်းမင်းကို @ ကိုပဥာဏ်........
“တော်ပြီ” ကဗျာထဲက.ဓာတ်ပုံမြင်ပြီး.သမီးစံ.ဖျားချင်သွားရတဲ့.. My Felling Blog ပိုင်ရှင် “ကိုတူး”....
မောင်(စွယ်စုံကြံ)၊ကိုအောင်ခိုင်မိုး(လူကြမ်းမင်းသားအောင်ခိုင်မဟုတ်ပါတဲ့ရှင်း)၊ကိုသက်ဝေ (နာမည်စသိ တုန်းက..အံ့ သြရပါသေးတယ်။အစ်မသက်ဝေလည်းရှိတာကိုး)
“ကျနော်သိသမျှ.မှတ်သမျှ.”ဘလော့ပိုင်ရှင်..ယောင်းမလေး Mishellး)
Holiday ဆယ်ရက်ရလို့..တဂ်ပို့ရေးဖို့.အသင့်ဖြစ်နေတဲ့..(အစ်ကို) စန်းထွန်းးP
လွန်ခဲ့တဲ့လကမှ..စေ့စပ်ထားပြီး..မကြာခင် Mrs ရာထူးကိုပိုင်ဆိုင်တော့မယ့် ငယ်ချင်း“အိပ်မက်စေရာ”
ငယ်ငယ်က.တုတ်ကျိုးအောင်.အမေရိုက်တာခံရလို့စိတ်နာနာ..နဲ့ကလေးတွေကိုပြန်ရိုက်ဖို့ .ဆရာမလုပ်နေတယ်လို့..ထင်ရတဲ့ ..အီဂျစ်ပြည်က တီချယ်“အော်တန်” (ဒါလည်းယောင်းမလေးပါပဲး)
ပန်းနုရောင်.ဘလော့အိမ်ပိုင်ရှင်.. ညလေး....“အင်ကြင်းချစ်သူ” ...တို့ကို..
ချစ်ခင်စွာနဲ့.. Tag ပါတယ်ရှင်
ကဗျာဆရာ “တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း”နဲ့.(သမီးစံရဲ့).အငယ်ဆုံးနဲ့.အချစ်တုံးမောင်..သန်လျင်သားပါ။ :P
အားလုံးပဲ..ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်..ချစ်ခင်တဲ့အထိန်းအမှတ်အနေနဲ့..ရေးပေးကြမယ်လို့ 100% ယုံကြည် ထား ပါ တယ်။
လွမ်းပိုင်ရှင် December 24, 2011 at 2:46 AM
လွမ်းစရာတွေများလို့ ညစ်နေတာနော် ဘာမှတ်နေလဲ တိုင်ပတ်ပလိ်ုက်မယ် ဟွန့်
blackroze December 24, 2011 at 2:46 AM
ပေးထားတဲ့တာဝန်အရ အမတော် စုံစမ်းလိုက်တာကတော့
အဲဒီ မို3း မိုးစလုံးက အဖေလည်းမတူ အမေလည်းမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်
မိုး ဆိုတာတူအောင် နာမည်ပေးထားခြင်းပါတဲ့..
အမတော်ရဲ့ စုံထောက်အတတ်ပညာကို ညမတော်
jerry pigpig တို့က မိနစ်ပိုင်းအတွင်းဘဲလှုပ်ရှားလိုက်တာနော်...
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် December 24, 2011 at 2:53 AM
ပျော်ရွှင်သော ခရစ္စမတ်နှင့် ပျော်ရွှင်သော နှစ်သစ်လေးပိုင်ဆိုင်ပါစေ
san htun December 24, 2011 at 4:26 AM
Merry X-mas & Happy New Year to သမံစီး !
မြတ်ကြည် December 24, 2011 at 4:40 AM
မိစံရေ၊ Merry Christmas နော်။
ရေးပြီးတာရှိတယ်။ မေးခွန်းတိုက်ရိုက်မဖြေပဲ ရေးထားလို့။
အဲလို ရေးတာတော်တာ။ ဟီးဟီး
အခမဲ့ ဗျူးတီးဆလွန်းပိုင်ရှင် :P
rose December 24, 2011 at 4:54 AM
သြော်... ဖြစ်ရမယ်... ညီမ ရေးထားတဲ့ ပို့စ် ပျောက်သွားပေမယ့် ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ အစ်မရဲ့ တက်ဂ်ပို့စ်လေးကို ဖြေပေးတာ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ညီမဖြေထားပုံလေးက တကယ်ပဲ ပြုံးရယ်စေပါတယ်။ အစ်မစဉ်းစားပြီး ချရေးထားတဲ့ ဒီမေးခွန်းတက်ဂ်ပို့စ်လေးကို လက်ဆင့်ကမ်းပြီး ထပ်တက်ဂ်ပေးလို့လည်း ၀မ်းသာရပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ဖွယ် နှစ်သစ်လေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။
Thet Nandar Family December 24, 2011 at 5:39 AM
တီတီ (✿◠‿◠) ... First ကွန့်မန့်ပေးလို့ရသွားပီ။ (¬‿¬)
အမြဲ နောက်ဆုံးမှ ကွန့်မန့် ပေးနေရလို့ ... (✿ ♥‿♥)
Wish you all have the perfect X'mas andawonderful new year 2012 !!!!
˛*˛°.˛*.˛°˛.*★* Merry Christmas & *★* 。*˛.
˛°_██.。./ ♥ \_ .˛* .˛。.˛.*.★* Happy New Year ★ 。*
˛. (´• ̮•).。*/♫.♫\_*˛.* ˛_Π___. ♥ ˛* ˛*
.°( . • . ) ˛°./• '♫ ' •\_.˛*./_____/~＼*. ˛*.。˛* ˛. 。2012!!!
*(...'•'.. ) *˛╬╬╬╬╬˛°.｜田田 ｜門｜╬╬╬╬╬!˚ .˛ .
လမင်းငယ် December 24, 2011 at 6:16 AM
Candy December 24, 2011 at 9:49 AM
ဖတ်သွားပြီ မမသမီးစံရေ... နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေဗျို့ :D :D
သဒ္ဓါလှိုင်း December 24, 2011 at 10:03 AM
မင်္ဂလာပါသမီးစံ။ ပျော်ရွှင်စရာလေးရေးထားတဲ့ ခရစ်စမတ်လေးနဲ့ နှစ်သစ်ကူးပုံဖေးထားတာလေးကို ပြုံးပြီး ဖတ်သွားပါတယ်။
အဖြူရောင်နတ်သမီး December 24, 2011 at 12:41 PM
Haveavery happy Merry Christmas & Happy New Year..
jasmine(တောင်ကြီး) December 24, 2011 at 1:29 PM
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! December 24, 2011 at 2:51 PM
Merry Christmas & Happy New Year....ပါ သမီးစံရေ...:):)
ဘိုဖြူ December 24, 2011 at 3:52 PM
chocolatecupidlay December 24, 2011 at 5:36 PM
သန်လျင်သား December 24, 2011 at 9:24 PM
အမ..ရေ.. နာစာရေးပျင်းတာလည်း တိရဲ့တားနဲ့ အတင်းရေးခိုင်းနေပါရား.. ချိတ်ညစ်တယ်..ဂယ်ပဲ..
ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့) December 25, 2011 at 12:48 AM
ပို့စ်မတင်ခင် ဒရတ်ဖ်တ်နဲ့ သိမ်းထားပေါ့။ ဒရတ်ဖ်ကမှ တစ်ဆင့် ကော်ဖီလုပ်ပြီး နယူးပို့စ်ထဲ သွားကူးယူ တင်ပေါ့။ ဒါဆို ခလုပ် အနှိပ်မှားရင်လဲ ဒရတ်ဖ်တ်ထဲမှာ ကျန်နေပြီးသားဆိုတော့ ပျက်သွားမှာ စိုးရိမ်ဖို့ မလိုပါဘူး။
သေချာမှတ်ထား ကြားလား။း)
ဘုန်းဘုန်းတောက် December 25, 2011 at 12:54 AM
စစချင်းပါပဲ သမံစီးရေ။ ၀ါးခနဲ ရယ်မိလိုက်ပါရောလား။ ရယ်ပြီးတော့ ခပ်တည်တည်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ (ဘုန်းဘုန်းလည်း အဲဒီလို ဖြစ်ဖူး၊ ကြုံဖူး ကိုယ်ချင်းစာလုိ့...)။ ဆက်ဖတ်တော့လည်း ဆက်ရယ်ရပြန်တယ်။ ဒါနဲ့ ဂျင်ဆန်းမီက အငြိမ့်မင်းသမီးလေး လုပ်ပါတော့လားကွယ်...။ (ဘဘဘတ်ချလာ တုံးဖလားသူကြီးမင်းလိုပဲ ရယ်စရာတွေ သိပ်ပြောတတ်လို့...)။ အော်...ဒါနဲ့ ဂျင်ဆန်းမီပြောတဲ့ အစ်ကိုစန်းထွန်းဆိုတာကော...ဘုန်းဘုန်းသိတာက အစ်မစန်းထွန်းပဲ သိတယ်...
မောင်မောင် December 25, 2011 at 2:00 AM
ဟီး သားကို ကလေးအုပ်စုထည်းမှာ ထည်.ထားတယ်---- ကျောင်းပိတ်တာနဲ. စရေးပါမယ် ဘ၀တစ်သက်စာအပျိုကြီး အစ်မစံ ခင်ဗျာ
Anonymous December 25, 2011 at 2:47 AM
ငါ့နာမည်ကိုများ ကြံ တဲ့ ကျမ်းတောင်မဟုတ်တော့ဘူး ယောက်ခမနဲ့ တိုင်လိုက်ရမလားပြော ခုမှသေချာကြည်မိတာ နင်မ၇ှိတုံး သေ၇ှာလာကြည့်တာဟေ့ ငါလည်းရေးပီးပေါ့ မူးနေတာ တင်လိုက်တယ်
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) December 25, 2011 at 3:16 AM
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ ခရစ္စမတ်အားလပ်ရက်လေးပါ သမီးစံ
သမီးလည်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ နေ့ရက်တွေကိုဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေနော်။ အပေါင်းအသင်း မိတ်ဆွေပေါလှတဲ့ ချစ်ညီမ
လူတိုင်းက ချစ်ခင်ပြီး ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ ပန်းလိုမွှေးပါစေနော်
စကားမစပ်.. စာရွက်ထဲမှာ နောက်တာပါ ဆိုပြီး ဘာတွေေ၇းထားလို့တုန်း ဟင် :P
Mishell December 25, 2011 at 10:10 AM
ကျေးကျေးပဲ ယောင်းယောင်းရေ။ နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်မှုအပြည့် ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ ကြံတိုင်းအောင်ပါစေကွယ်။
kztk December 25, 2011 at 2:00 PM
Merry Christmas and Happy New Year ပါ သမီးစံရေ...
တဂ်တဲ့ အထဲတော့ မပါဘူး ထင်တာပဲ... မရေးတက်တာနဲ့တော့ အတော်ပဲ.. မသိချင်ယောင်ဆောင်ကြည့်လိုက်အုံးမယ်... :P
mstint December 25, 2011 at 9:53 PM
သမီးစံတို့များတော်ပုံ တစ်ယောက်မှမကျန်အောင် တဂ်သွားလိုက်တား))
တဂ်ပို့စ်လေးကိုလည်း စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ရေးထားတာ အားပေးသွားတယ်နော်။
ချယ်ရီမြေ December 26, 2011 at 12:15 AM
အင်တာဗျူး အမေးအဖြေကဏ္ဍ ဖတ်ပြီးသွားပါပြီ သမီးစံရေ..၊ တက်တာတွေတော့ အတော်များတယ်နော်....။ သံဝေဇနိယလေးဌာန ဘုရားဖူးသွားနေလို့..ပြန်မရေးနိုင်ဘူးထင်တယ်။ ဘုရားဖူးပြီးရင် လက်ဆောင်ပို့လိုက်ပါ့မယ်...
ဟင်င်င်င်..... ဟင့်း) ဘာရေးရမှန်းသိဖူး
ဘတို့ကရေးဆို ရည်းစားစာပဲရေးနေကျဆိုတော့ တိန်း)
SHWE ZIN U December 26, 2011 at 7:52 PM
ညီမ မိစံ ရေ
ပျော်ရွှင်စရာ ခရစ်စမတ် ပိတ်ရက် ကလေး ဖြစ်ပါစေနော်
မဒမ်ကိုး December 27, 2011 at 1:08 PM
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ဒီဇင်ဘာနေ့ရက်များကို အေးအေးချမ်းချမ်းလေးကျော်ဖြတ်နိုင်ပါစေနော်း)
Mxmas & Happy New year ပါသမန်စီးလေးရေ
8Yar December 27, 2011 at 1:11 PM
ရေးပြီးသားပျောက်သွားတယ်.... နှမျှောလိုက်တာဟာ။ ပြန်ရေးပေးတဲ့ အတွက် ကျေးကျေးပါ သမံစီးရေ။ ဟွင်းဟွင်းဟွင်း သားနံမည် နောက်မှပါလာလို့။ မဟုတ်ရင် ပြတနာ အရှာပဲ။ :P
လွမ်းပိုင်ရှင် December 27, 2011 at 5:49 PM
နှမတော် သမီးစံရေ တဂ်ပိုစ့်မရေးတတ်လို့ မရေးပေးတာ စိတ်မဆိုးပါနဲ့နော် တလောကလုံးဗြောင်းဆန်သွားအောင် တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ ခင်မင်စွာဖြင့်